Savita Bhabhi - အိန္ဒိယ၏လူကြိုက်အများဆုံးနှင့်အငြင်းပွားဖွယ်ရုပ်ပြ | Absolut ခရီးသွား
maruuzen | | အိႏၵိယ
ငါရုပ်ပြတွေကိုဖတ်ချင်တယ်၊ ဒါကနယ်နမိတ်မရှိတဲ့အနုပညာအမျိုးအစားတစ်ခုပဲ။ ရုပ်ပြများသည်အမေရိကန်၊ ဥရောပနှင့်ဂျပန်တို့နှင့်ထပ်တူထပ်မျှဖြစ်နိုင်သော်လည်းအမှန်တရားမှာဥပမာအားဖြင့်အိန္ဒိယ၌ရုပ်ပြများလည်းရှိပြီးလူကြိုက်အများဆုံးရုပ်ပြများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ Savita Bhabhi ။
အဲဒါခေါ်တာပါ အိန္ဒိယ၏လူကြိုက်အများဆုံးနှင့်အငြင်းပွားဖွယ်ရုပ်ပြ ဒီနေ့ Absolut Viajes မှာသူနဲ့တွေ့ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်။ အိန္ဒိယရုပ်ပြတစ်ယောက်လား တကယ်လား ကောင်းပြီ၊ ဒါကြောင့်ဒီရုပ်ပြကိုသိဖို့ manga နဲ့အခြားအာရှနဲ့အနောက်တိုင်းရုပ်ပြတွေကိုခဏထွက်ခွာတော့မယ် အိန္ဒိယတွင်လုပ်.
2 Savita Bhabhi, အရုပ်ရုပ်ရုပ်
3 Savita Bhabhi ၏စွန့်စားမှု
အပိုင်းပိုင်းလိုက်ကြရအောင်ဂျက်ဟာ Ripper က ဒီတော့ဒီကြီးမားပြီးကျယ်ပြန့်တဲ့တိုင်းပြည်မှာကာတွန်းလောကအကြောင်းအနည်းငယ်သိကျွမ်းလာမှစကြပါစို့။ အိန္ဒိယရုပ်ပြများ၏နာမဖြင့်သွားပါ chitrakatha. ထိုစကားလုံးတွင်နိုင်ငံ၏ယဉ်ကျေးမှုကိုကိုယ်စားပြုသောရုပ်ပြစာအုပ်များနှင့်ဂရပ်ဖစ်ဝတ္ထုများပါဝင်သဖြင့်၎င်းတို့ကိုဤနေရာတွင်ပြောဆိုသောဘာသာစကားများစွာဖြင့်ထုတ်ဝေသည်။
အိန္ဒိယမှာအရမ်းကြွယ်ဝတဲ့ဘာသာတရားနဲ့ဒဏ္myာရီရှိတယ်ဆိုတာသတိရပါ တိုင်းပြည်တွင်စာဖတ်သူများ၏ရှည်လျားသောအစဉ်အလာရှိသည် အစောဆုံးကလေးဘဝမှစာအုပ်များ၊ ဂရပ်ဖစ် ၀ တ္ထုများနှင့်ရုပ်ပြစာအုပ်များဖြစ်သည်။ ဒီတော့တောင်မှကာတွန်းလောကဟာ ၆၀ ပြည့်လွန်နှစ်တွေကစပြီးမိသားစုနဲ့ကလေးပြည်သူတွေအတွက်ပဲဖြစ်ခဲ့တယ်။ မျိုးရိုးဗီဇ၏အရွယ်ရောက်သောဌာနခွဲသည်နောက်ပိုင်းတွင်ဤနေရာတွင်ပြောင်းလဲခဲ့သော်လည်းနောက်ဆုံးတွင်အောင်မြင်ခဲ့သည်။
စီးပွားရေးအဆင့်မှာ အိန္ဒိယရုပ်ပြများသည် ၁၉၈၀ နှောင်းပိုင်းတွင်အကြီးအကျယ်အောင်မြင်ခဲ့သည် နှင့်နောက်ဆယ်စုနှစ်၏အစ, ပရင်တာကျယ်ပြန့်ဖို့မပေးခဲ့သောနှစ်ပေါင်း။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ရောင်း ၀ ယ်ခြင်းအရေအတွက်သည် ထိုအချိန်မှစ၍ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးနှင့်ကလေးသူငယ်အပိုင်းအခြားအလိုက်ကျဆင်းခဲ့သည် ရုပ်မြင်သံကြားလိုင်းများနှင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းစက်ရုံများနှင့်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းအိန္ဒိယရုပ်ပြကမ္ဘာကဲ့သို့သောအဖြစ်အပျက်အချို့ရှိသည် ရုပ်ပြ Con India, အရုပ်ပြ Fest အိန္ဒိယ, Indie Comix ပွဲတော်သို့မဟုတ်နယူးဒေလီကမ္ဘာ့စာအုပ်ပြပွဲ။ ထို့အပြင်အိန္ဒိယရုပ်ပြတီထွင်သူများစွာသည် Dark House, DC, Archies သို့မဟုတ် Image အတွက်အနည်းငယ်အလုပ်လုပ်သောအနောက်သို့ပြောင်းရွှေ့လာကြသည်မှာလည်းမှန်သည်။
Savita Bhabhi, အရုပ်ရုပ်ရုပ်
အိန္ဒိယရုပ်ပြလောကအကြောင်းအနည်းငယ်ကိုသိပြီးယခု ဆက်၍ လေ့လာကြပါစို့ လူကြိုက်များနှင့်အငြင်းပွားဖွယ်ရုပ်ပြ။ အဘယ်ကြောင့်အငြင်းပွားဖွယ်ဖြစ်သနည်း အဲဒါက ညစ်ညမ်းရုပ်ပြ နှင့်အိန္ဒိယရှိလိင်အတော်လေးပြissueနာဖြစ်ပါတယ်။
Savita သည်ထိုနာမည်၏အမည်ဖြစ်သည် အမျိုးသမီးခဲ, un အိမ်ရှင်မ အိန္ဒိယယဉ်ကျေးမှုအရသိရသည်ကှကျအပြုအမူနှင့်အတူ။ အခြားစကားလုံး bhabhi, အစ်မကိုဆိုလိုသည်နှင့်အိမ်ရှင်မကိုရည်ညွှန်းရန်တိုင်းပြည်မြောက်ပိုင်းတွင်အသုံးပြုသောလေးစားမှုအသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါရုပ်ပြ 2008 ခုနှစ်တွင်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အဘို့အထင်ရှား။ ,အိန္ဒိယလူ့အဖွဲ့အစည်းသည်ရှေးရိုးစွဲဖြစ်နေသောကြောင့်မတ်လတွင်အငြင်းပွားဖွယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ရုပ်ပြလူတန်းစားသည်ရုပ်ပြကိုကိုယ်စားပြုသည်ဟုလူအများကပြောဆိုကြသော်လည်းထိုတောင်ပံသည်အလွန်သေးငယ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
သို့သော်အိန္ဒိယတွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများသည်တရားမ ၀ င်ပေလော။ ဟုတ်တယ်၊ အပြာစာပေရုပ်ပုံထုတ်လုပ်မှုသည်တရားမ ၀ င်ပါဒါကြောင့်အစမှစ အဆိုပါရုပ်ပြပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရှိရာဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုဆင်ဆာဖြတ်ခဲ့သည် လက်ရှိဥပဒေနှင့်အညီအစိုးရမှညှိနှိုင်းသည်။ ဒါပေမယ့်ချက်ချင်း လစ်ဘရယ်တောင်းဆိုမှုများရှိခဲ့သည် ပြီးတော့ဂျာနယ်လစ်အတော်များများကအစိုးရရဲ့အတိုင်းအတာကိုဝေဖန်ပြစ်တင်ဝေဖန်ခဲ့ကြပြီး၊ ထို့ကြောင့်ကာတွန်းကိုမဖျက်ဆီးနိုင်အောင်ရေများအလုံအလောက်လှုပ်ခဲ့သည်။
ပထမတော့ အဆိုပါရုပ်ပြနှင့် site ကိုဖန်တီးသူ ထုတ်ဝေခဲ့သည့်အတွက်၌ထားရှိမည်ခဲ့ကြသည် အမည်ဝှက်ခြင်း, Porn အင်ပါယာ၏အထွေထွေနာမကိုအမှီပေမယ့်တစ်နှစ်အကြာ, 2009 ခုနှစ်တွင် Puneet Agarwakဆိုက်ကိုဖန်တီးသူနှင့်ဗြိတိန်တွင်နေထိုင်သောဒုတိယမျိုးဆက်အင်ဒီးယန်းများကသူ၏တားမြစ်ချက်ကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်ရန်သူ၏မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ သို့သော်မိသားစုမှာကောင်းမွန်သောအချိန်မပေးနိုင်။ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင်ယင်းကိုကြေငြာခဲ့သည် အဆိုပါရုပ်ပြဆင်းသွားပါ။
ကြာရှည်မခံခဲ့ပေမယ့်အောင်မြင်ခဲ့တယ်၊ ပြီးတော့တခြားဘာသာစကားနဲ့လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့နည်းတွေပေါ်လာတယ်။ အမည်ရ 2011 ခုနှစ်တွင်ရှိ၏ ဟာသတစ်ခု2013 ခုနှစ်တွင် ရုပ်ရှင်တစ်ကား နှင့် 2020 ခုနှစ်တွင်တစ် ဦး ကစားသည်အိန္ဒိယလူမျိုးအိမ်ရှင်မရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစရိုက်ကလှုံ့ဆော်သည်။
Savita Bhabhi ၏စွန့်စားမှု
အမျိုးသားတွေရဲ့အပူချိန်ကိုမြှင့်တင်တဲ့အခါမှာဖော်မြူလာကလွယ်ကူပြီးအမြဲတမ်းအောင်မြင်ခဲ့တယ် - Savita သည်ငယ်ရွယ်။ လှပသောမိန်းမဖြစ်ပြီး၊။ အိန္ဒိယ၏ဓလေ့ထုံးစံများကိုအနည်းငယ်သိထားပြီးသူမ၏ဆံပင်သည်အနီရောင်ဆိုးဆေးဆိုးဆေးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းရှိခြင်းကြောင့်လက်ထပ်ခဲ့ကြောင်း၊ ငါတို့လက်ထပ်လက်စွပ်၏အိန္ဒိယနှင့်ဆင်တူသည့်ရွှေနားကပ်ကိုလည်းဝတ်ဆင်ထားသည်။
Savita သည်များသောအားဖြင့်ရိုးရာ Sari နှင့်အနီရောင်ထုံးကိုသူမ၏မျက်ခုံးကြားတွင် ၀ တ်ဆင်သည် bindi. ခင်ပွန်းသည်အိမ်နှင့်ဝေးနေသည်, အထီးကျန်, ပျင်းနှင့်လိင်မကျေနပ်မှုမှလွတ်မြောက်ရန် Savita သည်ဖြတ်သန်းသူတိုင်းနှင့်အလွန်ရင်းနှီးသည်။ ဖော်ရွေမှုအရသူမကသူတို့အားလုံးနဲ့လိင်ဆက်ဆံတယ်လို့ပြောတယ်။ မည်သည့်အရာကတားမြစ်သည်၊။ အနောက်နိုင်ငံများတွင်ကျွန်ုပ်တို့အားထုတ်ဖော်ပြသရန်သွေးထိုးလှုံ့ဆော်မှုအချို့ပင်ရှိသည်။
အဆိုပါရုပ်ပြစစ်မှန်တဲ့ဖြစ်ပါတယ် တားမြစ်ထားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွန့်စားမှု၏ Saga နှင့်ထိုအကြောင်းပြချက်ကြောင့်အိန္ဒိယလူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ရှေးရိုးစွဲတစ်ထိုးနှက်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ရုပ်ပြကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံ၏အကျော်ကြားဆုံးသောဘာသာစကားကိုးခုသို့ပြန်ဆိုထားသောအချက်သည်၎င်း၏အောင်မြင်မှုကိုအထောက်အကူပြုသည်။ အတွက်ထင်ဟပ်ခဲ့သည့်တစ် ဦး ကအောင်မြင်မှု 30 စာရင်းပေးသွင်းထားသူ က၎င်း၏အထွတ်အထိပ်ရောက်ချိန်တုန်းကအတွက်ရှိသည်ဖို့သိတော်မူကြောင်းကို။
Savita Bhabhi ၏အောင်မြင်မှုသည်လည်း ဒါဟာလူမှုဗေဒပညာရှင်များအကြားအပူအငြင်းပွားမှုများဖြစ်စေခဲ့သည်။ အားလုံးနီးပါးကယနေ့ပင်အိန္ဒိယလူ ဦး ရေ၏ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းသည်အလွန်ရိုးရာအစဉ်အလာရှိသည်ဟုဆိုကြသည်။ ဒါပေမယ့်ကာတွန်းကိုကြည့်ရင်တော့ဒီအကျင့်ဟာဘုန်းကြီးကိုမလုပ်ပေးဘူး၊ မင်းကိုလည်း ၀ တ်ဆင်ပြီးရိုးရာအရကြည့်တာကိုမင်းကမင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်ယဉ်ကျေးမှုစံနှုန်းတွေနဲ့တက်ကြွပြီးလွတ်လပ်စွာလိင်ဆက်ဆံမှုကိုတောင်မင်းမလုပ်နိုင်ဘူးလို့မဆိုလိုပါဘူး။
ပြီးတော့ဒါက Savita Bhabhi ကိုကောင်းကောင်းသရုပ်ဖော်တယ်။ အိမ်ထဲမှာဘာဖြစ်နေတာလဲ မဟုတျဘဲ la gallerie ကိုငါသွန်းလောင်း။ ငါတို့အားလုံးဟာအိမ်တွင်းမှာဖြစ်ပျက်နေတာကိုငါတို့အားလုံးသိတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမှမပြောတတ်ကြဘူး၊ ဒါမှမဟုတ်အနည်းဆုံးတော့ဒီရုပ်ပြမလာခင်အထိအိန္ဒိယမှာစကားပြောတာသိပ်မရှိဘူး။
ဒါပေမယ့်အိန္ဒိယမှာအခြေအနေတွေပြောင်းလဲသွားပြီလား။ မဟုတ်ပါ၊ အင်ဒီးယန်းများသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတော်လှန်ရေးအတွက်အဆင်သင့်မဖြစ်သေးပုံရသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ပေါ်ပေါက်လာသောဆွေးနွေးမှုသည်အမြဲတမ်းအပြုသဘောဆောင်ပြီးငယ်ရွယ်သောမျိုးဆက်အားအနည်းဆုံးသူတို့၏လိင်မှုဘ ၀ ကိုမညီမျှမှုများမှကင်းလွတ်စွာဆွေးနွေးရန်ခွင့်ပြုသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Absolut ခရီးသွားခြင်း » Savita Bhabhi - အိန္ဒိယ၏လူကြိုက်အများဆုံးနှင့်အငြင်းပွားဖွယ်ရုပ်ပြ